Ogaden News Agency (ONA) – Mudaaharaadyo Hadheeyay Sudan oo Khasaare Gaystay.
Mudaaharaadyo Hadheeyay Sudan oo Khasaare Gaystay.
Posted by Dayr	/ January 10, 2018
Magaalooyinka dalka Sudan ayey kusii fidayaan mudaharaadyada looga soo horjeedo sicir bararka ku yimid maciishada daruuriga ah sida Rootiga. Sicir bararkan ayaa yimid kadib markii ay dowladu hoos u dhigtay burka laga keeno dibada iyo waliba lacagtii ay ku kabi jirtay hoos u dhigida qiimaha maciishada daruuriga ah.
Magaalada Geneina ayay shalay ku dhinteen labo qof oo dhalinyaro ah oo ka qayb qaadanayey banaanbaxa looga soo horjeedo dowlada. Ciidamada amaanka ayaa lagu eedeeyey in ay awood xad dhaaf ah u adeegsadeen dadka shacabka ah ee banaanbaxaya, waxay sidoo kale dowladu suuqa ka saartay iibinta qaar kamid ah jaraa’idka dalkaasi kasoo baxa.
Waxaa iyaguna xabsiga la dhigay qaar kamid ah hogaamiyayaasha mucaaradka dalkaasi oo ay dowlada ku tuhunsan tahay in ay ku lug leeyihiin kacdoonka shacabka oo ay ka cabsi qabto. Dalka Sudan ayaa dhawaan laga qaaday xayiraadii dhaqaale ee uu Maraykanku saaray, arrintaasi oo dad badan rajo galisay in ay keeni doonto isbadal wanaagsan.
Isbadalkii la sugayey ayaa noqday mid khasaaro ku keenay suuqyada wadankaasi kadib markii ay hay’ada IMF ku talo siisay dowlada in ay joojiso lacagta ay dowladu ku kabto suuqa, isla markaana hoos u dhigto qiimaha lacagta wadankaasi Sudan oo horey u ahaa mid adag. Arrintan ayaa sababtay in ay saro u kacdo maciishada wadankaasi sida rootiga, waxayna keentay in ay shacabka markii ugu horeysay in muddo ah ay dhigaan banaanbaxyo looga soo horjeedo go’aadii ay dowlada qaadatay.